I-china PG27DQI-165Hz mveliso kunye nabenzi | Umboniso ogqibeleleyo
Le modeli inayo yonke imisebenzi ye-eSports elindelweyo, enexesha le-1ms yokuphendula kunye ne-AMD FreeSync ephelisa ukuthintitha kunye nokukrazula, kodwa ngoku ine-HDR. Uluhlu olutsha lweDynamic Range (HDR) luphucula umdlalo wakho wokudlala kunye noluhlu olubanzi lwabamnyama nabamhlophe ukubonisa ukucaca okumangalisayo kunye neenkcukacha ongazibonanga ngaphambili. Ungaze uphinde uphuthelwe ngumchasi wakho ochwechwela phantsi kwezithunzi kwakhona. Iplagi exhaswayo kunye nokudlala kwaye uza neadaptha yangaphakathi ..
Ukufumana isandla esiphakamileyo nakweyiphi na imeko yokudlala kunye ne-165Hz ephezulu yothotho lwe-PG. Ukuthatha inqanaba lokuhlaziya ngokukhawuleza kwaye ulidibanise nesuti epheleleyo yeempawu zepremiyamu kudala umboniso okhuphisanayo we-eSports kwinqanaba lamaxabiso elingazange labonwa ngaphambili. Ukuthembisa ngamava alula-agudileyo, uthotho lwe-PG luya kubonelela ngokudlala umdlalo obalaseleyo wobomi kunye nethuba lokuqinisekisa ukuba isakhelo ngasinye siziswa kuwe ngaphandle kokulahleka. Yiya ngaphezulu nangaphaya kwento oqhele ukuyisebenzisa ngamehlo ukuphucula izakhelo zakho.
Ukutshintsha ngokuzenzekelayo ukukhanya kwe-RGB kukuzisela umthendeleko obonakalayo omnandi, umdlalo kunye neemfuno ezininzi zemarket zombala. Abasebenzisi banokwenza ingqikelelo ye-DIY Ilogo. Yakhelwe kwi-powrsupplywill izisa idesika ecocekileyo
I-QHD ibonelela ngamaxesha angama-4 oxinano lwe-pixel ye-HD, ivelisa ngokucacileyo iinkcukacha ezibukhali, ezibukhali, ngelixa ikwakha indawo ebanzi ekuvumela ukuba ukonwabele amava okudlala.
Ixesha lokuphendula ngokukhawuleza kwe1ms
Ungaphoswa nto ngexesha lokuphendula le-1ms, apho isakhelo ngasinye sentshukumo sifakwa kwi-millisecond elula. Fumana umgca ophezulu ngaphezu kwabachasi bakho, ulungele imidlalo yeFPS.
Inkululeko yokuKrazula iScreen ngeFreeync
Itekhnoloji eyakhelwe-ngaphakathi ye-AMD Radeon FreeSync eyilelwe ukufezekisa amava amnandi kunye nokuzinzileyo kwezemidlalo ngokuphelisa konke ukukrazula okubonakalayo, ukuthintitha, kunye nokuqhuqha.
Okulandelayo: I-4K yothotho lwensimbi-UHDM433WE
Umzekelo: YM320QE (G) -75Hz